Starbucks, azonao atao ny manao asa sosialy tsaratsara kokoa. Martech Zone
Talata, Desambra 29, 2015 Talata, Desambra 29, 2015 Douglas Karr
Misintona kely ny karatra media sosialy aho rehefa tsy maintsy atao izany. Izaho manokana, amin'ny maha-tompona orinasa ahy, dia mikorapaka matetika aho rehefa mahita mpanjifa ampahibemaso am-pahibemaso orinasa amin'ny Internet. Indrindra rehefa politika ary matetika tsy ny solontenan'ny mpanjifa mahantra no diso. Ny CSR dia matetika tsy manao ny lalàna, mazàna olona ambony kokoa ary somary tsy tratra akory izay mitantana ireo zavatra ireo.
Amin'ity tranga ity, na izany aza, tsy maintsy zarako ampahibemaso ity tranga ity satria manondro ireo olana sahirana amin'ny orinasa maro raha ny resaka media sosialy. Ary koa, tsy orinasa irery izany… marika matanjaka misy tombony azo indroa heny noho ny orinasa antonony. Midika izany fa afaka mihaino izy ireo ary afaka manitsy ity olana ity hanatsarana ny media sosialy mijoro manerana ny tobin'ny mpanjifany.
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nanao dia an-tongotra niverina tany Florida ho any Indiana aho. Dia fitsangatsanganana isaky ny telovolana no tiako ary tiako ny mandeha mangina, ny toerana ary ny fotoana hieritreretana zavatra. Mpankafy kafe aho (mety ho taitra ny Starbucks raha mahita ny teti-bolantsika isan-taona ho an'ny orinasanay kely amin'ny karatray Starbuck) ary matetika mandahatra ny fijanonako mifanaraka amin'ny toerana misy ny Starbucks amin'ny fivoahana ho avy.
Tany McDonough, GA dia nivoaka ny I-75 aho ary nitondra kilaometatra vitsivitsy nankany amin'ny Starbucks. Rehefa niditra ny magazay aho dia niditra tao amin'ny efitranon'ny lehilahy ary taitra be. Tototry ny fako ary rakotra ny gorodona. Tsy hilazalaza ny hanitra aho, fa miharihary fa efa ela be io. Tsy hoe tsy antenaiko ho tsy misy pentina ny trano fidiovana iray eo akaiky eo… fa tsy tobin-tsolika ity, saingy ilay Starbucks malalako.
Nijoro milahatra aho ary nijery barista iray nitantana ny fiara, ary ny iray hafa mihazakazaka mandehandeha mitazona ilay tsipika. Nanisa mpiasa fanampiny 5 nijoro ara-bakiteny tsy nanao na inona na inona aho. Rehefa avy nandray ny fisotroako aho dia nandeha teo amin'ny latabatra iray ary toa tsy nofafana nandritra ny ora maro izany. Nisy fonosana mololo sy servieta nanaparitaka ny gorodona teo anelanelan'ny marika famafazana. Nitaraina aho ary nivoaka tany ivelany izay nakako ity sary ity ary nizara azy tao amin'ny Twitter.
@Starbucks maloto ity magazay ity. Ao anatiny, ivelany, trano fandroana, zavatra rehetra. Ary mpiasa marobe mitsangana manodidina. pic.twitter.com/gFFxKEya46
- Douglas Karr (@Douglaskarr) Desambra 27, 2015
Tsy nahazo valiny aho, fa nisy mpanaraka iray hafa nibitsibitsika ary nanontany hoe aiza no misy ny Starbucks… ka novaliako izy ary nampiditra an'i Starbucks.
@harrisja @Starbucks I-75 ao amin'ny McDonough, GA. Ny trano fidiovana dia mihoatra ny fakana sary.
Ny bitsika voalohany dia tamin'ny 2:11 PM. Namaly ihany i Starbucks tamin'ny 4:09 PM:
@douglaskarr Manahy izahay - pls antsipirian'ny mailaka any amin'ny twittercustomerservice@starbucks.com w / fampahalalana momba ny fivarotana: https://t.co/osOKugph5J. Miala tsiny.
- Fanampiana Starbucks (@starbuckshelp) Desambra 27, 2015
Ugh. Tsy namaly mihitsy aho.
Angamba tamin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra dia be atao loatra ny haino aman-jery sosialy Starbucks mba tsy handinika ny bitsiko. Bitsika iray ihany io, sa tsy izany? Eny, karazana. Amin'ireo olona rehetra nitsidika io fivarotana maloto io tamin'io andro io, izaho irery ve no nampandre azy ireo olana iray?
Firy ny olona tsy Buckees no niditra sy nivoaka niaraka tamin'ity magazay ity raha ny no fahatsapana voalohany? Firy amin'ireo mpanaraka ahy no very finoana kely amin'ilay marika tian'izy ireo. Firy amin'izy ireo izao no mitady trano fisotroana kafe hafa eny an-dalana fa tsy Starbucks satria ny fitohizan'ny fivarotana tsara tarehy no nikatso? Fantatro fa tsy handeha ho any amin'io fivarotana manokana io aho atsy ho atsy.
Ity ny zavatra tiako ho hita tao amin'ny Tweet iray avy amin'ny Starbucks:
Manahy izahay, hoy ny niantso ny mpitantana ny fivarotana. DM aho mba hahavitanay anao. Jason
Tsy ho sarotra ny nahita ilay fivarotana, azonao atao ny mampiasa ny app Starbucks na ny toerana fivarotany:
Ho an'i Starbucks sy ny orinasa hafa manara-maso ny media sosialy, ireto misy lesona ianarana:
Time Response - Raha nipetraka tao amin'ny Starbucks aho dia tsara ny nahazo valiny. Roa ora taty aoriana dia nasehony ahy fa tena tsy miraharaha izy ireo.
Empowerment - Tena nanontany ve ny media sosialinao? me handefa mailaka olona? Fa maninona ianao no tsy nomena fahefana hifandray amin'ny mpitantana ny fivarotana?
hanamaivanana - Tsy voatery ho an'ny orinasa ny manarina ny lesoka fa afaka manamaivana ny olana izy ireo amin'ny fanehoana fankasitrahana. Mety tsara ny manome ahy crédit amin'ny carte Starbucks-ko.
Personalize - Samy mankahala marika tsy misy anarana daholo isika rehetra. Mety ho nanintona sy manokana ny sonia tamin'ny anaranao (fantatro fotsiny ny anarana iray).
Mbola mpankafy Starbucks aho ary manantena ny hihaino an'ity fanehoan-kevitra ity ary hanatsara ny fizotran'ny fanaraha-maso ara-tsosialy.
Tags: Social Media Marketingfanaraha-maso ny media sosialyvalin'ny media sosialyfanaraha-maso ara-tsosialyStarbucksstarbucks socialTwitter